स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्ष २०७३ मा के के भए नीतिगत सुधार? - Everest Dainik - News from Nepal
स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्ष २०७३ मा के के भए नीतिगत सुधार?
काठमाडौँ, चैत ३१ । गएको वर्ष सिङ्गो मुलुकले विद्युत् कटौतीको विकराल समस्याबाट मुक्ति पाए जस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विभिन्न सुधारात्मकहरु कदमहरु चालिएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत सुधार र दुर्गम र विकट गाउँठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन मन्त्री र उहाँका सहयागीहरु लागिपरेका छन् । यस विषयमा प्रशासनिक रुपमा भने पर्याप्त सहयोग नभएको विषय पनि बाहिर आउने गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कुपोषणका कारण बालिकाको मृत्यु
ट्याग्स: health, ministery of health